दाइजो नपाउँदा आफ्नै श्रीमतीको मृगौला चोरेर बेचेपछि…. – Everest Dainik – News from Nepal
दाइजो नपाउँदा आफ्नै श्रीमतीको मृगौला चोरेर बेचेपछि….
भारतमा एक पुरुषले आफ्नै पत्नीको मृगौला चोरेका छन् । मृगौला चोरेको आरोपमा महिलाका श्रीमान् र देवर पक्राउ परेका छन् । दुई वर्षअघि पेट दुखेर अस्पताल भर्ना गरिएकी ती महिलाको ऐपेन्डिक्सको शल्यक्रिया भएको थियो ।
दाइजो नपाएको झोकमा उनले पत्नीको मृगौला चोरेको पीडित रीता सरकारले बताएकी छन् । भारतमा विवाहमा दाइजोस्वरूप रकम दिने कुप्रथाको सन् १९९६ देखि कानुनी रूपमा अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अझै देखिन्छ ।
शल्यक्रियाबारे कसैलाई पनि नभन्न रितालाई पतिले चेतावनी दिएका थिए । केही महिनापछि उनी बिरामी परेपछि उनको परिवारका सदस्यहरूले अस्पताल लगेका थिए । परीक्षणका क्रममा उनको मृगौला हराएको खुलासा भयो ।
उनले पुनः अर्को परीक्षण गरिन् तर मृगौला निकालिएको पुष्टि भयो । ‘मेरा पतिले मिर्गौला निकालेर मलाई शल्यक्रियाबारे गुपचुप राखेका रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘भनेजतिको दाइजो मेरा बाबुआमाले दिन नसकेपछि उसले मृगौला बेचेर पैसा उठायो ।’ महिलाको मृगौला चोरीमा एउटा तस्कर समूह नै संलग्न भएको प्रहरी निरीक्षक उदयशंकर घोषले बताए ।